Canadanepal.net: Successful dream of being one of the 100 women in the world,Sapana Rokka Magar
विश्वकै सय जना महिलाभित्र पर्न सफल सपना मगरको सबै नेपालीले हेर्नैपर्ने सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता,बेवारिसे लासहरुको अन्तिम दाहासंस्कार गरेकै कारण एउटी साहासी नारीको रुपमा सपना रोका मगरलाई बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेपछि अहिले उनी चर्चाको शिखरमा छिन् । उनलाई यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा अन्तवार्ता दिन भ्याई नभ्याई भएको छ । बिबिसीले छनौट गर्दा सपना गाउँम थिईन् । आफुलाई बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेको खबर सपनाले गाउँमै छँदा थाहा पाएकी हुन् । सो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै सपनाले नेटको व्यवस्था गर्दै लाईभमा आएर सबैलाई धन्यबाद दिएकी थिईन् । कति सोशल मिडिया त उनीसंग अन्तरवार्ता लिनकोलागी उनको गाउँमै पुगेका पनि थिए । कतिले भने सपनाको लाईभ भिडियोलाई आधार मानेर समाचार बनाएका थिए । पछिल्लो समयमा भने सपना काठमाण्डौमा फर्किएकी छिन् । उनी काठमाण्डौ फर्किए लगत्तै पत्रकार रिसी धमलासंग अन्तवार्तामा बसेकी छिन् । उक्त अन्तरवार्तामा सपनाको मन जति आँट र साहासले भरिएको छ त्यो भन्दापनि कयौं गुना बुलन्दित आवाजको प्रस्तुति रहेको देख्न पाईयो । त्यही बुलन्दित पारामा सपनाले रिसी धमलालाई नै उल्टै प्रश्न पनि गरिन् । अन्रवार्ताकै क्रममा सपनाले भनिन्,‘तपाईँको यही कार्यक्रममा आएर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको होईन र ? हाम्रो देशमा कहींकतै पनि बेवारिसे लासहरु छैनन् भनेर ? आज मलाई तिनै बेवारिसेहरुको अन्तिम दाहा संस्कार गरेको भन्दै बिबिसीले छान्नु भनेको हाम्रो देशमा बेवारिसे लासहरु र मान्छेहरु छन् भन्ने नै हो नि ? अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा कस्तो प्रश्न गर्नु हुन्छ ?’ सपनाको यो प्रश्नले पत्रकार धमला एकछिन् सम्म त अक्क न बक्क परिरहे ।